Iimidlalo ezi-7 ezilungileyo ze-indie ze-Android | I-Androidsis
UAron Rivas | 26/05/2021 08:00 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
I-Play Store yindawo yokugcina i-Android eyintandokazi kunye ne-repertoire ye-apps, izixhobo kunye, kunjalo, imidlalo yazo zonke iintlobo, kwaye ukususela ngeli xesha siza kuthetha ngemidlalo, siza kuthetha ngee-indies, enye yeendidi uninzi luceliwe kwaye lufunwa ngabasebenzisi, njengoko lenziwe ngezihloko, ubukhulu becala, ezitsha kunye / okanye ezingenakho ukhuphelo oluninzi, kodwa oko akuthethi ukuba ayinazo iigugu eziyinyani zemidlalo ezixabisekileyo ukukhuphela nokuvavanya.
Inye into elungileyo malunga nemidlalo ye-indie kukuba bathambekele ekubeni nezinto ezintsha kakhulu, kwaye oku kungenxa yokuba abaphuhlisi babo bazama, nokuba nzima ngakumbi kunabaphuhlisi abakhulu abavela kwiinkampani ezineewallet zohlahlo-lwabiwo mali olukhulu ukuzenza, ukuze benze izinto ezintsha kwezi zinto, yiyo loo nto bakholisa ukuba ngaphandle kwesiqhelo kwiimeko ezininzi, ukuze babenze bafezekise impumelelo enkulu kwaye benze indawo phakathi kukhuphiswano olunzima lwemidlalo ekhoyo kwiVenkile yokuDlala, ezele ngamawaka namawaka ezihloko, nganye nganye engcono kunomnye. Kwaye ukunika ingqalelo kwabanye, ngeli xesha siqokelela eyona imidlalo indie ye-Android.
Udidi lwemidlalo ye-indie lunokugcwala kwimidlalo yazo zonke iintlobo, Eziqala kwezintsha kwaye ziphuhliswe ngabaphuhlisi ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali olukhulu kunye / okanye iinkampani ezincinci ukuya kwabo banokukhutshelwa okumbalwa kwaye abaziwa kangako, nangona zininzi izihloko ezikwazileyo ukuba yimpumelelo epheleleyo, ke banokuthandwa okuphakathi esibhakabhakeni, kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana okuninzi ngeli xesha. Apha ngezantsi uyakufumana eyona midlalo mihlanu yaseIndiya i-Android.
Ngaphambi kokuya kuyo, kufanelekile ukuqaqambisa okuqhelekileyo: enye okanye ezingaphezulu kwezo sizidwelise kwesi sithuba sokudibanisa sinokuba nenkqubo yokuhlawula encinci ngaphakathi, ukufikelela kwipremiyamu kunye nemisebenzi ephambili, kunye namabhaso kunye nemivuzo. Nangona kunjalo, zonke zisimahla kwaye akukho sidingo sokuqokelela nayiphi na imali.
1 Iicookies kufuneka zife
2 Inqaba ekhohlisayo
3 Ulwandle lwe-Oceanhorn
5 Ubudala obuthuleyo
6 Iziqalekiso zeePipi
7 Amabala emibala-Iphazili yokuphumla enamachaphaza kunye neemilo
Iicookies kufuneka zife
Iicookies kufuneka zifezelwe yenye yeemidlalo ze-indie ezithandekayo nezonwabisayo ze-Android, ngaphandle kwamathandabuzo, kunye nemizobo kunye noopopayi abangashiyi nto ingafunwayo. Uxhalabile ngakumbi, Sithetha ngokuphumelela kuMnyhadala weMidlalo yeGoogle Indie kunyaka ophelileyo, esithetha kakuhle kakhulu ngendlela esisebenza ngayo esi sihloko.
Apha sinayo UJack, iarhente eyimfihlo enkulu enamagunya akhethekileyo emzimbeni wakhe owayeyilwe zizazinzulu zikarhulumente. Isixeko sisesichengeni, kwaye kungenxa yeicookies ezimbi eziceba ukusihlasela sinikwe imiyalelo yeeboss, ekufuneka uzoyisile ngokunjalo. Gcina umhlaba kwaye ube yimpumelelo kwimfazwe yasentsomini ye-apocalyptic.
Baninzi abalinganiswa abaceba ukoyisa wena, bonke bumnandi, kodwa hayi ngenxa yeso sizathu bengenakunceda kwaye benobuhlobo, kodwa ngokuchaseneyo. Ngumdlalo weqonga onezenzo ezininzi, izixhobo zazo zonke iintlobo ezinokuphuculwa kunye namandla amangalisayo.
Umthuthukisi: Amawele angabavukeli
Kulungile ukubeka ingqondo ukuba isebenze ngexesha; Ngale ndlela, siyigcina isebenza kwaye, kuba kufanelekile ukugcina impilo yomzimba, ikwayimfuneko nokugcina impilo yengqondo, kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunemidlalo yokudlala iphazili enjengeNkohliso yeNqaba?
Vavanya ubukrelekrele bakho ucombulule amaqhina, iimfihlakalo neepuzzle ukuba, ngelixa zihlala zilula ekuqaleni, ziqala ukuba nzima njengoko uqhubeka ngomdlalo. Baleka inqaba ufumane i-princess; Yithathe kwi-Villain eyoyikekayo, uphephe imigibe kunye nayo yonke imiqobo ezayo.
Inqaba ekhohlisayo-Imidlalo yeLogic
Umthuthukisi: IMICIMBI YOKUGQIBELA YOKUZIPHATHA
Igama lalo mdlalo liwonga irhamncwa laselwandle elibizwa ngokuba yi-Oceanhorn, noloyiko lomdlalo ngokwawo. Kukwakho neziqithi ezininzi zolwandle olungakhange luhlolwe kunye nolungakhange luhlolwe, ekuya kufuneka uhambe ukuze ufumanise kwaye ungene kwindawo engaqondakaliyo, enobungozi kwaye, ngaphezulu kwako konke, iindawo ezingalindelekanga kunye nezidalwa ezingazange zibonwe ngaphambili.
Imizobo ye-3D kunye noopopayi banomdla ngokwenene, ngemihlaba enomtsalane ekuntywilisela kwi-adventure yasentsomini ethi i-Oceanhorn icinge. Kuya kufuneka ubenenkathalo yokuhamba kwaye woyise uhambo. Kuya kufuneka uphinde ukhangele kwaye ufumane izinto ezininzi ezifihliweyo eziza kukunceda kwinkqubo.
Umdlalo ukhululekile ukukhuphela kunye nokufaka, kodwa ukuvula zonke izinto ezikuyo kufuneka wenze ukuthengwa kwangaphakathi. Ngale nto, ungadlala i-Oceanhorn iiyure ezininzi.
Umthuthukisi: FDG Ukuzonwabisa GmbH & CoKG
Ukuba ungomnye wezikolo ezindala eziye zaba ne-PC enohlobo oludala lweWindows, usenokuba uyidlalile iPinball kwimbonakalo yayo yeklasikhi kunye nembonakalo. Ukuba kunjalo, ngokuqinisekileyo ubungomnye wabo bonwabele umdlalo kakhulu kwii-2000s zakuqala, ngaphezulu kwayo nantoni na. Emva koko Uyayithanda iPinOut, kuba ngumdlalo wepinball onomxholo ohlaziyiweyo kunye nekamva, eneenkcukacha ezibonakalayo ezibonakalayo kunye namava okudlala ngokuntywiliselwa kakhulu, inokuba yeyiphi enye indlela, ixhaswe sisandi somculo esikhulu esiqhayisa ngesihloko se-indie.
Ku malunga umdlalo weArcade apho ufumana ubunzima obuninzi ukoyisa amanqanaba, njengemowudi yesilingo sexesha. Izibane kunye nesingqi esingqungileyo sikutshonisa kwiPinOut kwaye asivumeli umzuzu wokudinwa, kodwa, ewe, kuya kufuneka uyazi ngebhola, kuba awufuni kuphulukana nayo.
I-PinOut ngumdlalo okhululekileyo ngokupheleleyo, ukongeza, awunalo naluphi na uhlobo lwentengiso, into exatyiswa ngokwenene, kuba iintengiso zihlala zonakalisa amava okudlala.
Ukuba ungumtshatsheli weemeko ezimdaka kunye ne-apocalyptic, lo mdlalo we-indie unokukuonwabisa. Into ke kukuba iXesha eliThuleyo sisihloko esisibuyisela emva kwii-70s ezikude, kunye nakwisithokothoko esimnyama esine-dystopian kunye ne-surreal apho uhlanga loluntu luphele kwaphela, into ethi, ngokucinga ngayo, thina Sele ungene kwilizwe eloyikisayo, elikhohlakeleyo nelimnyama kakhulu.
Ngokusekwe kumandla okudala "amanqaku kwaye ucofe" kwimidlalo, lo mdlalo, owabelana ngokufana okuninzi nabanye abohlobo lwawo, inikeza indlela elula yokudlala, kodwa ngenkqubela phambili kuyo, iya isiba nzima ngakumbi, eyenza ukubheja okunomdla ukuxhoma ngendlela eyonwabisayo.
Umlinganiswa ophambili okanye ophambili yindoda eneminyaka yobudala obuphakathi, ukwakhiwa okuphakathi kunye nomntu oqhelekileyo onyanzelwayo ukuba angene kwimeko ezimbi zomdlalo. Uyayilawula; menze ukuba aphile kwaye abe lixhoba lokusinda kulo mdlalo!
Umthuthukisi: Indlu yoMlilo
Ukuba imidlalo ye-retro ene-pixelated oopopayi yinto yakho, yeyakho le. Kwelinye icala, ukuba ucwangcisa ukuhamba nge-nostalgia ngesizathu esifanayo, Iziqalekiso zeCandies'n sesinye sezihloko onokuthi ukonwabele ukudlala kakhulu., kuba imihlaba yabo kunye nemixholo ikukhumbuza ukuba zingaphi imidlalo yeqonga lezinto ezindala ezazinazo.
UMolli Pop ngumlinganiswa oza kumlawula ngaphakathi komdlalo. Menze oyikise izihlwele zezidalwa kunye neziporho kwindlu eyoyikisayo nephambeneyo apho kulawula isiphithiphithi nophazamiseko, ekwakukade kuhlaselwa kwaye kuhlaselwa nguKumkani oyiMoya.
Njengoko usiya kwiiCursies 'nurses, ungahlaziya iMolli Pop ngezibane ezintsha, eziyimfuneko ukukhanyisa indlela kunye nokoyisa iziporho, kunye nobuchule obenza ukuba ubhetyebhetye kwaye ubethelele, okuyimfuneko ukoyisa nokuphepha izidalwa ezizama ukumoyisa ukuze angabi kwinqanaba. Ukongeza, ukufezekisa umsebenzi wokoyisa uKing Ghost, ungasebenzisana namantshontsho asisiporho kunye nezinye izidalwa ezivela ngaphaya. Umsebenzi wakho kukucoca indawo yokuhlala yabantu abakhohlakeleyo abafuna iswekile yokuphelisa ukunxanwa kwabo!
Umthuthukisi: I-Tako Boy Studios LLC
Amabala emibala-Iphazili yokuphumla enamachaphaza kunye neemilo
Amaxesha amaninzi sijonga imidlalo ukuba sonwabe kwaye sihlale ngaphandle ngendlela eyonwabisayo, ngaphezulu kwayo nantoni na enje ngexesha lokulinda nokudinwa, kodwa kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha sifuna nje ukuphumla, kwaye ngenxa yoku kukho imidlalo emininzi eyisebenzelayo injongo, kwaye kulapho safumana umbala Amabala-Ukuphumla ipuzzle ngamachaphaza kunye neemilo, umdlalo wokuphumla nokucoca ingqondo.
Esi sihloko se-indie sibonisa iiphazili ezimile imibala emininzi, ezimnandi kwaye ziyaphumla. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kulula ukusombulula; Njengoko uqhubeka, izinto ziya zisiba nzima, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ungangaphumli kangako. Vavanya kwaye uphucule isantya sokuphendula kwakho, ubhetyebhetye, ukuchaneka kunye neliso elichanekileyo ngalo mdlalo we-indie omnandi nolula oko, ukongeza, kukukhanya okungaphezulu, nobunzima, obuncinci kakhulu, obungaphezulu kwe-15 MB. Into elungileyo malunga nalo mdlalo kukuba ayifuni kunxibelelwano lwe-Intanethi, ke inokudlalwa ngalo naliphi na ixesha naphina, nokuba uphazamiseke okanye ube nexesha elimnandi nelonwabisayo.
Umthuthukisi: I-UX Apps
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iimidlalo ezi-7 eziphambili ze-indie ze-Android
Iimidlalo ezi-5 eziphambili zeDragball ze-Android